Video Editor & Video Maker - InShot 1.614.253.MI Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.614.253.MI လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာ Video Editor & Video Maker - InShot
Video Editor & Video Maker - InShot ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အကောင်းဆုံး အားလုံး features တွေနှင့်အတူအခမဲ့ HD ကိုဗီဒီယိုအယ်ဒီတာနှင့်ဗီဒီယိုသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား, ကိုချုံ့ & ဖြတ်ကဗီဒီယို / ရုပ်ရှင် မှုန်ဝါးနောက်ခံ နဲ့ အဘယ်သူမျှမသီးနှံ , ဂီတ နဲ့ ဗွီဒီယိုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ add!
InShot - Google က Featured ထိပ်တန်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဂီတနှင့်အတူ HD ကိုလိုလားသူကဗီဒီယိုအယ်ဒီတာ Play, Youtube, Instagram ကို, Tik Tok, IGTV, Facebook, Messenger ကို, Whatsapp ဘို့ပြင်ဆင်ရန်ဗီဒီယို, သငျသညျငွိမျဝနှင့်အတူဗွီဒီယိုကိုဖန်တီးကူညီပေးသည် တွစ်တာစသည်တို့ကို
ဗီဒီယိုညှပ် & ဗီဒီယို Cutter & ဗီဒီယို Splitter
* ချုံ့နှင့်ဗီဒီယိုခုတ်ဖြတ်။ Pro ကိုဗီဒီယိုကညှပ် & ရှုးနှင့်ဗီဒီယိုသီးနှံ app ကို။
အတော်ကြာကလစ်ပ်သို့အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု Multi-အုပ်စုခွဲဗီဒီယိုများသို့ * Split ကိုဗီဒီယိုများ။
* သီးနှံဗီဒီယိုနှင့် HD ကိုအရည်အသွေးကပို့ပါ။ Easy-To-ကိုအသုံးပြုဖို့အခမဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ & YouTube အတှကျဒေါင်လိုက်လိုလားသူဗီဒီယိုကအယ်ဒီတာ။
ဗီဒီယို Mergers & ဗီဒီယိုဆက်ပေးသူ
တဦးတည်းသို့မျိုးစုံကလစ်များပေါင်းစည်း။ ဒါဟာအရည်အသွေးကိုဆုံးရှုံးမပါဘဲဗီဒီယိုကိုပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ချုံ့, ဗီဒီယိုကိုချုံ့ & ဖြတ်အုပ်စုခွဲကူညီပေးသည် Youtube, Instagram ကို, Musical.ly, Tik Tok စသည်တို့ကိုများအတွက်အခမဲ့ video ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Instagram ကို & Whatsapp အဘို့အဘယ်သူမျှမကသီးနှံ app ကို။
ဗီဒီယိုအချိုး & ဗီဒီယိုနောက်ခံ
* မည်သည့် aspect ratio အတွက်သင်၏ video ကွက်တိ။ Easy-To-အသုံးပြုမှုကို Instagram တွင်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာနှင့် Tik Tok အယ်ဒီတာ။
* ရင်ပြင်ဗီဒီယို, အဘယ်သူမျှမသီးနှံကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်လိုလားသူသည်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာ app ကို။
* ကွဲပြားခြားနားသောနယ်နိမိတ်နှင့်မျှမသီးနှံထည့်ပါ။ နောက်ခံအရောင်နဲ့ဗီဒီယိုမှုန်ဝါးအယ်ဒီတာ။
* ရုပ်ရှင်စတိုင်ဗီဒီယိုအား filter များနှင့်ထိုကဲ့သို့သောချို့ယွင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု, ရပ်တန့်ရွေ့လျားမှုအတိုင်းအပြည့်အဝသက်ရောက်မှုထည့်ပါ။
* စတာတွေကဗီဒီယိုရောင်ခြည်ဆန့်ကျင်ဘက်, ရွှဲ, စိတ်ကြိုက်ဗီဒီယိုက filter များနှင့်ဗီဒီယိုသက်ရောက်မှု Adjust ။
ဗီဒီယို မှဂီတ Add
* Add InShot အခမဲ့ဂီတ, ဗီလော့ဂ်ဂီတသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဂီတကိုအသုံးပြုဖို့ featured ။
* / ထွက် option ကိုအတွက်ဂီတအသံအတိုးအကျယ်နှင့်ဂီတမှိန် Adjust ။
* ကဗီဒီယို filter များနှင့်ဗီဒီယိုသက်ရောက်မှုနှင့်အတူဗွီဒီယိုကိုမြန်နှုန်း Adjust ။ အစာရှောင်ခြင်း / အနှေးရွေ့လျားမှုမျက်နှာပြင်အပြည့်ကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်အခမဲ့ video ညှပ်နှင့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ app ကို။
Video Converter & ဓာတ်ပုံစလိုက်ရှိုးဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
* အလွယ်တကူ MP4 ကို format နဲ့ဗီဒီယို convert ။ အခမဲ့ video ရှုး app ကို။
* ဗီဒီယိုအတွက်ထုံးစံဓာတ်ပုံကိုမျက်နှာဖုံး add, ဗွီဒီယိုများနှင့်အတူဓာတ်ပုံများရောထွေး။
* နောက်ထပ်ဗီဒီယို, အင်္ဂါရပ်တွေကိုတည်းဖြတ်မကြာမီလာမယ့်။
မည်သည့်အချိုးအတွက် * သီးနှံဗီဒီယိုက။ အစွမ်းထက်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် Youtube, Instagram ကို, Musical.ly, Tik Tok စသည်တို့ကိုအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုကသီးနှံ app နဲ့ဗီဒီယိုတည်းဖြတ် app ကိုများအတွက်လိုလားသူဗီဒီယိုကအယ်ဒီတာ။
ရေစာသို့မဟုတ်မည်သည့်မလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် * သီးနှံဗီဒီယိုက။
* / ထွက်ဗီဒီယိုထဲမှာမှန်ဘီလူး။
စာသား & စတစ်ကာ
* စာသားတည်းဖြတ်ရေးအတွက်ဗီဒီယို, များစွာသောစာလုံးတွေပေါ်စာသားကိုထည့်ပါ။
* ကာတွန်းစတစ်ကာများနှင့်ရုပ်ပြောင်ထည့်ပါ။ အပတ်စဉ်အသစ်ပြောင်းခြင်း။
Flip & Rotate ဗီဒီယို
* 90 ဒီဂရီအားဖြင့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုလှည့်ပါ။
* Flip ကိုဆင်းမှတက်ကဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ညာဘက်ထားခဲ့တယ်။
* မြန်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်အတွက်ဗီဒီယို tools တွေကိုလှည့်။
လွယ်ကူ Share ရန်
* အကောက်ခွန်ကဗီဒီယိုပို့ကုန် Resolution, HD ကိုလိုလားသူကဗီဒီယိုအယ်ဒီတာ (1080p သို့မဟုတ် 4K), ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ
အားလုံးလူမှုရေး apps များစသည်တို့ကို Youtube, Instagram ကို, IGTV, Facebook, Whatsapp, Tik Tok မှ * ဝေမျှမယ်
မှ Collage & ဓာတ်ပုံ Editor ကို
* ထူးခြားသော filter များ & ရောင်စုံနောက်ခံ, မှုန်ဝါးနောက်ခံ။
* ထောက်ခံအကွိမျမြားစှာအချိုး။ ချစ်စရာဘောင်။ ပျော်စရာလက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု။
InShot အားကောင်းတဲ့မျက်နှာပြင်အပြည့်ကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူ & ဗီဒီယိုကိုညှပ်ဖြစ်တယ်, အားလုံး features တွေအခမဲ့ဓါတ်ပုံကိုဆလိုက်ရှိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုကအယ်ဒီတာ။ ဒါဟာဖြတ်တောက်ချုံ့ခြင်းနှင့်ရေတိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများသို့ကြာမြင့်စွာသောဗီဒီယိုကွဲအဘို့ကြီးသောပါပဲ။ အဆိုပါမှုန်ဝါး tool ကိုလည်းသင့်ရဲ့ဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုအဘို့အမှုန်ဝါးနောက်ခံကူညီပေးသည်။ InShot နှင့်အတူ, သင်အလွယ်တကူ, ဗီဒီယိုမှဂီတ add နိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုပေါ်တွင်စာသားကိုထပ်ထည့်, ဗီဒီယိုလှန် & လှည့်, ဗီဒီယိုပေါင်းစည်း။ အစာရှောင်ခြင်း / အနှေးရွေ့လျားမှု feature ကိုစူပါပျော်စရာပါပဲ။ InShot မျက်နှာပြင်ကိုဗီဒီယိုအယ်ဒီတာနှင့်ဗီဒီယိုရှုးအပြည့်အဝအခမဲ့ HD ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျသီးနှံကဗီဒီယိုအလွယ်တကူလုပ်နိုင်နှင့် Tik Tok များအတွက်ဂီတနှင့်ပါ pic နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်ဆုံးရှုံးမရှိဘဲတင်ပို့ခြင်း, တဦးတည်းကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် Instagram ကို, IGTV, Facebook, Whatsapp, Youtube, Twitter နဲ့ Messenger ကိုရန်သင့်ဗီဒီယိုများဝေမျှ, ဒါမှမဟုတ်ပြင်ဆင်ရန်ဗီဒီယိုက။
InShot ဘို့မဆိုမေးခွန်းများကို (ဂီတ & ဗီဒီယိုကိုထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့အခမဲ့ Video အယ်ဒီတာ, ဓာတ်ပုံဆလိုက်ရှိုးထုတ်လုပ်သူ)? instashot.android@gmail.com မှာကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်
Video Editor & Video Maker - InShot အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Video Editor & Video Maker - InShot အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Video Editor & Video Maker - InShot အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Video Editor & Video Maker - InShot အား အခ်က္ျပပါ
Video Editor & Video Maker - InShot ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Video Editor & Video Maker - InShot အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.614.253.MI
App Name: Video Editor & Video Maker - InShot
လက်မှတ် SHA1: 19:65:C6:BC:CF:BD:F2:8D:BE:97:7E:54:60:F3:86:A1:DB:9E:73:66
ထုတ်လုပ်သူ (CN): CameraIdeas
အဖွဲ့အစည်း (O): CameraIdeas
Video Editor & Video Maker - InShot APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ